Shiinaha JB160A Warshadaha Mashiinka Socodka Hawada ee Piling Rig iyo iibiyaasha | Mashiinka Injineerka
JB taxane Hydraulic Walking Piling Rig waa naqshad caan ah is dhexgalka sare ee korantada, hydraulic iyo farsamada piling rig. Waxay gabi ahaanba leedahay Xuquuqda Lahaanshaha ee Madaxabanaan waxaana laga siiyay shahaadooyin ka socda dawladda Shiinaha sababtuna tahay teknolojiyaddeeda casriga ah. Xaruntu waxay bixisaa waxqabad aad u wanaagsan, shaqo lagu kalsoonaan karo, waxaa si ballaaran loogu isticmaalaa habka SMW (Qaabka Ciidda isku-dhafka ah ee Ciidda). Xariga waxaa lagu dhejin karaa makiinada naaftada naaftada, qalabka horay loo soo kiciyay, iyo qalabka kale, iwm. Waxay ku habboon tahay duruufaha kaladuwan iyo aasaaska, sida, jidadka waaweyn, wadooyinka waaweyn, buundooyinka, dekedaha, biyo-xireyaasha, saldhigyada metrooga iyo barafka dhaadheer. .
Qiimaha FOB: US $ 0.5 - 9,999,999 / Piece
Min. Tirada Dalabka: 1 Qabo / Xabbado
Awoodda Sahayda: 100 xabbo / xabbo bishii kasta
Dekadda: Dekadda Shanghai
Hogaamiyaha, mashiinka ugu weyn iyo qalabka socodka waxaa loogu talagalay wadida gawaarida culus, si loo hubiyo shaqo xasilloon oo wax ku ool ah.
Miisaan qaada xamuul culus.
2. U FUDUD KU SAABSAN AQOONSIGA IYO
GUDDAHA Qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka qaab-dhismeedka, qaab fudud ayey u leeyihiin isu imaatin iyo kala-baxa.
Dibadbaxayaasha kiciya qaab dhismeedka oo leh qaab wareejin wareega, ayaa waxaa dhaqaajiya dhululub, taasoo badbaadinaysa dhibaatada kala-baxa. Waa la kala diri karaa oo waa loo adeegsan karaa qaybaha, si sahlan oo
3. NIDAAMKA KHUDBADKA Korantada iyo Xakamaynta Korantada iyo Teknoolojiyadda
labadaba durbaanka korantada iyo kaabayaasha ah waxay ku hoos jiraan xakameynta saamiga korantada, waxaa laga heli karaa kantaroolka xawaaraha isbeddelaya oo xira xawaare kasta.
Bamka weyn, matoorka xakameynta, cabirka cadaadiska, durbaanada ayaa dhamaantood adeegsanaya.
4. NABADGELYADA KHUDBADA XAQIIJINTA IYO XIRFADAHA SIYAASADAHA
Hogaamiyaha heerka sare leh ee loo yaqaan 'goniometer' iyo kormeerka xagal culeyska (ikhtiyaar u leh) ayaa bixiya macluumaad deg deg ah oo ku saabsan baytar-garaaca iyo awooda jiidista, gilgil qaylo-dhaan halka khatarta ku jirta. Howlihi hore waa lagu guuleysan karaa inta lagu gudajiro isku xirka wadashaqeynta taxanaha ZLD iyo dareemayaasha (ikhtiyaari).
Qalabka qodista qotodheer ee qotomiska quseeya (waa ikhtiyaari) waxay bixisaa xog qoto dheer oo qashin ah, xawaaraha qulqulaya, xaddiga slurry, iyo wax soo saarka macluumaadka.
5. KABKA FURASHADA XARUNKA KHUDBADDA SAFARKA
Si fiican u qolka qolka wadaha ee leh shan gaashaanta dabeyshu waxay xaqiijineysaa jawi deggan oo deggan oo leh tabar yaraan.
Levers xakamaynta dareeraha dareeraha ayaa u oggolaanaya wax qabad wanaagsan iyo xakameyn fudud.
Booska loogu talagalay sanduuqa kontaroolada qodista, kormeerka xagal culeyska culeyska (ikhtiyaar), kormeer qoditaan qoto dheer (ikhtiyaari ah) ayaa lagu hayaa qolka hawlwadeenka, ka dhig xakameynta hal-wadaha mid sahlan oo la isku halleyn karo.
AQOONSIYADA SHAQADA FARSAMADA EE JB160A
1. JB160A waxaa ku qalabeysan durbaanno awood badan. Hogaamiyaha caadiga ahi waa (Max.42m), kuna haboon habka SMW.
2. Dhererka dhululubka toosan wuxuu gaarayaa illaa 3100mm, oo si fudud loo dhaqaaqi karo iyadoo la isticmaalayo habka SMW. Heerka toosan ee dhululubogu waxay gaarayaan ilaa 400mm, taasoo bixinaysa dabacsanaan badan shaqada shaqada.
3. Jayrarka kor loo qaado ee loo yaqaan 'JB160A' waxay hubiyaan in 900mm-height-height ah.
4. Qaabeynta qaab-dhismeedka u gaarka ah waxay dammaanad qaadeysaa is-toosinta iyada oo aan laga helin qalabka adeegga. JB160A waxay sameyn kartaa dherer dhan 39m.
5. JB160A waxaa lasiiyay xuquuq aqooneed oo dhameystiran iyo 7 rukhsadood oo la oggol yahay soo saar.
Shayga JB160A Haydarooliga Socodka cuskaday Rig
Wadarta guud ee hogaamiyaha (m) 21 ～ 39
Dhexroor hogaamiyaha (mm) ø920
Masaafada udhexeysa farqiga u dhexeeya hogaamiyaha iyo qalabka dhajinta (mm) 600 × ø101.6
Xag u janjeera hogaamiyaha (bidix ilaa midig) (°) ± 1.5
Istaroog dhabarka ah (mm) 2800
Hogaamiyaha jaridda faaligga dhululubo (mm) 400
Max. auger model ZLD180 / 85-3-M2-S
Max. nooca loo yaqaan 'hammer hammer' D160
Max. dhererka hogaamiyaha (m) 39
Max. xoog jiidid (oo uu la socdo hogaamiyaha Max) (KN) 706.3
Hydraulic winch (loogu talagalay kor u qaadida kuleylka, dameerada naaftada) Soosaarista xoogga hal xadhig (KN) 91.5max
Dabeyshada iyo dib-u-soo-dhalaridda (m / min) 0 ～ 26
Dhexroor xarig (mm) ø21.5
Awoodda qadarka (m) 550
Hydraulic winch (loogu talagalay kor u kaca, tuubada qashin qubka, rakibka) Soosaarista xoogga hal xadhig (KN) 68max
Dabeyshada iyo dib-u-soo-dhalaridda (m / min) 0 ～ 32
Dhexroor xarig (mm) ø20
Awoodda qadarka (m) 265
Xaglo goynta (°) 10
Safarka transverse Xawaaraha safarka (m / min) <4.5
Tallaabada safarka (mm) 3100
Safarka tooska ah Xawaaraha safarka (m / min) <2.7
Tallaabada safarka (mm) 800
Kordhinta orodka Xawaare (m / min) <0.55
Dherer (mm) + 450 ～ -450
Fogaanshaha udhaxeeya Shaqo (mm) 9100
Safarka (mm) 4800
Masaafada u dhexeysa bilaha wadooyinka ku jira Shaqo (mm) 4800
Safarka (mm) 5000
Wadada wareejinta-wareejinta Dhererka (mm) 9500
Ballac (mm) 1200
Wadada-dhaqaaqa toosan Dhererka (mm) 6900
Ballac (mm) 1700
Isku xirka u dhexeeya doomaha wax banaafaca iyo madal Pin wareejin, dhululubo fidsan
Celcelis ahaan cadaadiska dhulka (MPA) 0.1
Awoodda dhaqdhaqaaqa (kw) 45
Nidaamka dadku buuq badan yahay (MPA) 25/20
Hawlaha nadaafadda hawadu Xakameynta gacanta & korantada
Isugeynta culeyska xirmooyinka xirmooyinka (T) ≈130
Ogeysiis: Faahfaahinta waxaa lagu soo rogayaa in la beddelo iyadoon ogeysiis hore la helin.
Dhererka hogaamiyaha waxaa lagu dheereyn karaa 42m iyadoo la raacayo shuruudo gaar ah.
Wax soo saarkii MEXICAN: D100 & JB160A / TAIYUAN PROJECT Product: ZLD180 & JB160A / PHILIPPINE PROJECT Product: D138 & JB160A / SHANGHAI EXPO SITE Product: ZLD220 & JB160A / MALAYSIA PROJECT Product: ZLD1801
1. ADEEGTA XARUNTA WACANKA BILAASHKA ah
Waxaan u fidinnaa adeeg xarun wicitaan lacag la'aan ah 24ka saac. Wixii macluumaad dheeri ah ee alaabada SEMW ama adeegga iibinta ka dib, fadlan naga soo wac + 0086-21-4008881749. Waxaan ku siin doonaa macluumaad ama xalal aad u baahan tahay.
2. QIIMEYNTA & XULASHADA
Kooxdayaga xirfadda leh waxay bixiyaan adeegyo la-talin oo bilaash ah iyadoo loo eegayo goobaha shaqada ee kala duwan, xaaladaha ciidda iyo shuruudahaaga.
3. BAARITAANKA & TABABARKA
SEMW waxaa ka go'an hagida bilaashka ah ee rakibida iyo tijaabada, si loo hubiyo inaad sameyn karto hawlgallo sax ah.
Waxaan ku bixin doonnaa tababar goobta haddii loo baahdo, si loo hubiyo inaad ogaatoah ee dayactirka, lafa-gurista iyo dib-u-habaynta xumaanta.
4. DIIWAANADA & JOOJINTA
Waxaan xafiisyo ku leenahay meelo badan oo dalka Shiinaha ah, oo ay fududdahay dayactirka.
Sahay kufilan oo loogu talagalay alaabada firaaqada ah iyo xiridda qaybaha.
Kooxdayada adeegyadu waxay leeyihiin khibrad balaaran oo balaaran oo ku saabsan mashruuc kasta oo weyn ama yarba. Waxay ku bixiyaan xalka ugu fiican jawaab deg deg ah.
Adeegyo badan ayaa la bixiyaa, sida, dirista macluumaadka alaabada cusub ee la sii daayay,. Waxaan sidoo kale ku siinnaa dalab qaas ah.
XARUNTA SOO IIBSASHADA EE GLOBAL
Diesel Hammers waa sheyga ugu muhiimsan ee SEMW. Waxay ku mutaysteen sumcad wanaagsan gudaha iyo dibeddaba. Hammer manel SELW waxaa loo dhoofiyaa tiro aad u badan Yurub, Ruushka, Koonfur-bari Aasiya, Waqooyiga Ameerika, Koonfur Ameerika, iyo Afrika.
Hore: Gawaarida gawaarida ee SPR 115
Marka ku xigta: JB170 Socodka Hawada Piling Rig
Socodka Khamriga ee Jb Taxadirka Masaafada
Jb160b Socodka Hawada Masaafada ee Xaraashka
Socodka Pill Rig
Socodka Pill Rig Soo Saaraha Soo Saaraha
JB170 Socodka Hawada Piling Rig
Gawaarida gawaarida ee SPR 115
Alaabada Featured - Khariidadda
Dra25 / 18 Dual Power Drilling Rig , Dra25 / 12 Dual Power Drilling Rig , China Hm Series Hydraulic Hammers , Dra Series , Dual Power Drilling Rig , Dra13 / 5 Dual Power Drilling Rig ,Dhamaan Badeecadaha
版权所有 ： 上海 工程 机械 厂 有限 ， 备案 号 ：沪 P 11029013 号技术 支持 ： 全球 搜 公司 版权所有